Izahay dia manana ny fahaizana, ny hery ara-teknika, ny fanodinana mandroso sy ny fitaovana fanaraha-maso ary ny traikefa mba hametrahana fifandraisana tsara amin'ny mpanjifa manerantany .nanana rafitra fitantanana modem izahay hiantohana ny kalitaon'ny vokatra sy ny vidiny mirary ny ankamaroan'ny vokatra harato tariby ...
DingZhou HongYue HradWare Products Co., Ltd dia naorina tamin'ny 1989. dia tao amin'ny varotra sy ny orinasa mpamokatra entana nandritra ny 20 taona, Vita tamin'ny milina sy ny fitaovana mandroso ara-teknika, ny orinasanay dia nanjary fantatry ny indostria ary iray amin'ireo mpanondrana lehibe an'ny harato harato ...
Fahasamihafana eo amin'ny harato vita amin'ny fantsom-boaloboka mafana sy elektro nandroso vy
1. Ny tsy fitoviana lehibe: ny fantson-drivotra mafana dia ny fanalefahana ny zinc ao anaty rano, ary avy eo alentika ao anaty rano ilay substrate, ka ny zinc dia mamorona sosona interpenetrating miaraka amin'ilay substrate hapetaka, ka tena mifamatotra ny fatorana, ary tsy misy loto na kilema mijanona eo afovoan'ny ...
Electro Galvanization dia dingana iray izay misy sosona manify ny zinc mifatotra amin'ny herinaratra sy simika amin'ny tariby vy mba hanomezana azy. Mandritra ny dingan'ny Electro Galvanization dia taroboka anaty fandroana masira ny tariby vy. Zinc dia miasa ny anode ary ny Steel Wire dia miasa toy ny cathode sy ny herinaratra ...
Ahoana no anaovana Wire Galvanized Hot Dipped - Hot Dipped (GI) Wire?
Amin'ny fizotran'ny Galvanizing Hot Dipped, ny tariby vy tsy misy sarimihetsika tokana dia ampandalovina amin'ny fandroana zinc. Ny tariby dia ampandalovina amin'ny zinc metatra rehefa avy nandalo dingana fanadiovan-tsakafo 7-dingana henjana. Ny fizotran'ny fanadiovana dia manome antoka ny firaiketam-po sy ny fifamatorana tsara kokoa. Hamafana ny tariby avy eo ary coati ...